China PET triangle efu Tea Bag ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya JIERO-GROUP
karịa 16 afọ ahụmahụ
Ịrụ ọrụ, Nọgidenụ na -eme nke ọma, Mmeri merie
Ihe 6 kacha mkpa ịhọrọ anyị
Akpa tii nwere ike imebi
Akpa Tea na-enweghị akpa
Akpa Nylon Tea
Akpa Pet Tea
PLA ọka Fiber Tea akpa
Akpa Tea efu
PET Tea akpa
Akpa tii a na-ejighị akwa PLA
PLA isi Fiber ntupu Fabric
PET ntupu akwa
Non kpara Fabric
PET triangle efu Tea akpa
Mkpado mkpọtụ ahaziri ahazi
Biodegradable, na-adịghị egbu egbu na nchekwa, enweghị isi
Ngwugwu: 6000pcs/mpịakọta, 6rolls/katọn
Obosara ọkọlọtọ anyị bụ 120mm, 140mm na 160mm wdg. Mana anyị nwekwara ike bee ntupu n'ime obosara akpa tii dị ka arịrịọ gị si dị.
Ihe nzacha maka tii akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, tii ojii, tii ahụike, tii rose, ahịhịa ahịhịa na ọgwụ ahịhịa.
Ọ bụ ogo dị elu na mpe mpe mpe akwa PET ebe ọ bụ ọmarịcha ọdịdị ya mere ndị na -azụ ahịa ji amasị ya, mkpụrụ osisi na ifuru dị na akpa tii pyramid nghọta nke juputara na -ewepụta ihe na -atọ ụtọ ma na -esi ísì ụtọ. Ọ bụ ihe nchịkọta akpa nhọrọ maka tii niile dị elu.
Akpa nzacha PET pụrụ iche na -anabata teknụzụ ultrasonic nke Japan. Akpa tii pyramid nwere ike ịchacha ụtọ tii mbụ. Nnukwu oghere na -eme ka akwụkwọ tii mbụ gbatịa nke ọma. Ihe na -esi ísì ụtọ Roses, mkpụrụ osisi na -amị amị na ngwakọta agwakọta nwere ike ịhakọta ọnụ.
Nchikota a bụ nkecha, nzacha ngwugwu ọkwa nri.
1) Ọ dị mfe yana ngwa ngwa ịme akpa tii pyramid na -enweghị nzacha ọzọ.
2) Akpa tii pyramid na -enye ndị ahịa ohere ịnụ ụtọ isi mbụ.
3) Kwe ka tii gbasaa nke ọma na akpa tii pyramid, ma meekwa ka ewepụta tii kpamkpam.
4) Nri ngwa ngwa
5) Jiri tii mbụ mee ihe n'ụzọ zuru oke, nwere ike ime biya ugboro ugboro ogologo oge.
6) Ultrasonic seamless sealing, na-akpụpụta onyonyo nke teabag dị elu. N'ihi nghọta ya, ọ na -enye ndị na -azụ ahịa ohere ịhụ ịdị mma nke akụrụngwa n'ime, echegbula onwe gị gbasara akpa tii site na iji tii dị ala. Tea pyramid nwere atụmanya ahịa sara mbara ma bụrụ nhọrọ maka ị nweta tii dị oke mma.
Nke gara aga: Akpa Tea na-enweghị akpa
Osote: Akpa Tea na-enweghị akpa
Naịlọn triangle efu Tea akpa
PLA ọka Fiber efu Tea akpa
PLA akpa akpa akpa (35g/18g)
Mba 3, Huaqian Okporo ụzọ, Pingqiao Town, Taizhou, Zhejiang, China
Global polylactic acid (PLA) ahịa ahịa ọnọdụ na d ...
Nchọpụta ụlọ ọrụ | Ọnụ ahịa PLA ka dị elu n'ihi ...
Mgbanwe oge na ohere dị ebube karịa! 2021 Hotelex Sha ...
Ememme ngosi tii mba China nke anọ emere na Hangzhou
2021 China Xiamen International Tea Industry Fair (mmiri ...